हि’न्दु ध’र्मको अपमान गरेको भन्दै विवादमा हिमेश पन्त, दिए यस्तो स्पष्टीकरण – Khabarhouse
हि’न्दु ध’र्मको अपमान गरेको भन्दै विवादमा हिमेश पन्त, दिए यस्तो स्पष्टीकरण
Khabar house | २० माघ २०७६, सोमबार ०६:०६ | Comments
काठमाडौं । लोकप्रियताको उकालो चढिरहेको रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियनका उपाधि दावेदारका रुपमा हेरिएका मध्ये एक हुन् हिमेश पन्त। तर, दुई हप्ता अगाडिको एउटा प्रस्तुतिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा उनी विवादमा तानिएका छन् । गत माघ १३ गते प्रशारित १६ औं एपिसोडमा हिमेशले ‘अन्धविश्वासी वैज्ञानिक’को रुपमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
उक्त स्ट्यान्डअप कमेडीमा उनले बोलेको एउटा डाइलगले सीता माताको अप’मान गरेको भनेर आ’पत्ति जनाइएको हो । हिमेशले वैज्ञानिकहरुले पनि ध’र्ममा विश्वास राख्ने कुरालाई लिएर यसरी व्यंग्य गरेका थिए । ‘म खत्रै वैज्ञानिक हुँ, पढेको पढ्यै गर्छु । अघि भर्खर ४ अध्याय स्वस्थानी पढेर आएको हुँ । स्वस्थानीमा लेखेको रहेछ भगवान गणेश मुसामाथि चढे । एक त मोटो गणेश त्यसमाथि हात्तीको टाउको छ ।
मुसामाथि किन अत्या’चार गर्ने ? मेरो बाउ शिव भएको भए म भन्दिन्थेँ, बुवा म पनि अब साँढे चढ्छु । मुसामाथि चढ्ने होइन नि यार । बरु बिरालो माथि चढ्दा हुन्छ । जैले बाटो काटेको काट्यै गर्छ।’ ‘भगवान राम साइन्टिस्टको पनि बाउ हो के । सीतालाई आ’गोमा हालेर जूठो कि चोखो पत्ता लगाइदे । तर, किन यत्रो तमासा ? टन्न र’क्सी खुवाइदिएको भए साँचो बोलिहाल्थिन् नि । ’
उनले भगवान रामले सीताको अग्नी परीक्षाको सट्टा मदिरा पिलाएको भए हुन्थ्यो भन्ने वाक्य प्रयोग गरेका थिए । भगवानका बारेमा यति हल्का कुरा गरेको र थोरै पनि गम्भीर नभएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि पन्तको पनि प्रतिकृया आएको छ। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको स्टाटस हेर्नुहोस्